सुदूरपश्चिम सरकारकी प्रवक्ता भन्छिन्ः अहिले मुख्यमन्त्री फेर्दा अस्थिरता हुन्छ – Nepal Press
सुदूरपश्चिम सरकारकी प्रवक्ता भन्छिन्ः अहिले मुख्यमन्त्री फेर्दा अस्थिरता हुन्छ
२०७८ जेठ ३१ गते १२:०२
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता पूर्णा जोशीले तत्काल सरकार परिवर्तन उपयुक्त नरहेको बताएकी छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री समेत रहेकी माधव नेपालपक्षीय नेतृ जोशीले अहिले सरकारको परिवर्तनको विषय ल्याएर थप अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास भइरहेको बताइन् ।
‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ’ उनले नेपाल प्रेसलाई भनिन्, ‘अब एक बर्ष सरकार परिवर्तनको विषय उपयुक्त होइन ।’
जोशीले सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर थप संकट पैदा गर्न खोजिएको बताएकी छन् । ‘मुख्यमन्त्री बनाउने भए दलको नेता हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला कुनै कुरा आएन । अहिले सभामुखलाई राजीनामा गराउने कुरा गरेर थप समस्या निम्त्याउन लागिएको छ,’ जोशीले भनिन् ।
जोशीले भनिन्, ‘सभामुखलाई दलको नेता बनाउने विषयमा पनि दलको बैठकमा पनि कुरा होला । त्यहाँ सहमति भएन भने के गर्ने ? सभामुख आउनेवित्तिकै दलको नेता मान्छन् भन्ने पनि त होइन । ’
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु भन्दाअघिल्लो दिन सम्म एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दुवै पक्षबीच गम्भीर छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।
‘माओवादीलाई छोड्न लगाउने, मन्त्रालयको कार्य विभाजन गरौँ भन्ने कुरा कहिल्यै आएन’ उनले भनिन् ‘त्यस्तो प्रस्ताव आएको भए त्यसमा छलफल हुने थियो ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यसो भए एमाले एक ठाउँमा नआउने हो त ? प्रश्नमा मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘जेठ २ मा फर्किने अवस्था आएपछि सबै समाधान हुन्छ । मेरो गोरुको बारै टक्का गर्दा मिल्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन ।’
५२ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखसहित एमालेका २५ सांसद छन् । सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई राजीनामा गर्न लगाएर जसपासँग मिलेर सरकार गठन गर्ने विषयमा एमालेभित्र छलफल चलिरहेको छ ।
प्रकाशित: २०७८ जेठ ३१ गते १२:०२